Warbixin” Turkiggu wuxuu ku talaabsaday horumar balaadhan oo dhinaca Warshadaynta Hubka ah ”. | Salaan Media
January 23, 2021 | Published by: Hamse
” Turkiggu wuxuu ku talaabsaday horumar balaadhan oo dhinaca Warshadaynta Hubka ah ”.
warshadaha difaaca ee Turkiga waxay bartilmaameedsanayaan sanadka 2023 $ 27 bilyan oo doolar, $ 10 bilyan oo ay dhoofiyaan iyo shaqaalaynta warshadaha difaaca oo gaadha qiyaastii 80,000 oo qof, sida uu sheegayo Ismaaciil Demir oo ah , gudoomiyaha Warshadaha Difaaca ee Madaxtooyadda (SSB).
Marka la barbardhigo, dhoofinta Difaaca ee Turkigu hadda waxay isu geyn tahay $ 3 bilyan oo doolarna korodhkuna waa $ 12 bilyan.
Turkiga wuxuu hada wadaa 700 oo mashruuc ay ku hawl-lan yihiin shirkadaha difaaca oo leh $ 60 bilyan oo miisaaniyad ah , Demir oo ka hadlayaana wuxuu yidhi intii lagu gudajiray kulankii warshadaha difaaca dalwadda ee sanadkan ay markii seddexaad qabanqaabiyeen Isbahaysiga Difaaca ee Istanbul iyo Ururka Aerospace Cluster Association (SAHA) oo kaashanaysa Rugta Ganacsiga ee Istanbul (ITO).
Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Droneska ayaa soo jiitay indhaha caalamka kadib isticmaalkooda balaaran ee Libya iyo Nagorno Karabakh. Xoghayaha Difaaca UK Ben Wallace ayaa ku tilmaamay diyaaradaha aan duuliyaha laheyn inay yihiin kuwa badalaya ciyaarta.
“Adduunku mar dhow ayuu arki doonaa diyaaradaha dagaalka ee Bayraktar iyo Anka oo dul heehaabaya hawada Yurub waxaana maamulaya wadamada EU,” ayuu yiri Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank.
Isaga oo sheegay in kharashka warshadaha difaaca adduunku ay kor u dhaafeen $ 2 trillion (TL 14 trillion) illaa iyo 2019, Varank oo hadalkiisa sii wataana wuxuu wuxuu yidhi: “Isweydaarsiga warshadaha difaaca iyo duulista ee dalkeennu wuxuu gaadhay $ 12 bilyan. Dhoofkeennii oo ahaa $ 340 milyan sanadkii 2005, waxay maanta gaareen 3 bilyan oo doolar. ”
Wasaaraddu waxay taageertay 813 mashruuc oo warshadaha difaaca ah oo qiimahoodu ku dhow yahay TL 5 bilyan ($ 674.8 milyan) barnaamijyada laga fuliyay Golaha Cilmibaarista Sayniska iyo Teknolojiyada ee Turkiga (TÜBITAK), ayuu yiri.
Barnaamijka Taageerada R&D ee Amarka-Ku-saleysan, oo leh awood ganacsi oo sare isla markaana siisa taageero maal-galineed mashaariicda cilmi-baarista iyo horumarinta (R&D) ee macaamiisha diyaar u ah, ayaa hadda qiimeynaya hannaanka 14 codsi oo ka socda warshadaha difaaca, ayuu yiri Varank, iyagoo intaas ku daray waxay bixin doontaa taageero ilaa TL 2.5 milyan ($ 337,400) mashruuc kasta.
Waxa uu intaa ku daray, iyada oo loo marayo Maamulka Horumarinta iyo Taageerada Shirkadaha Yar-yar iyo Dhexdhexaad (KOSGEB), in ay kheyraad siiyeen 131 shirkadood oo ka shaqeeya warshadaha difaaca labadii sano ee la soo dhaafay oo keliya.
Wasaaraddu waxay soo bandhigtay shahaadooyin dhiirrigelin ah oo loogu talagalay 346 mashruuc oo ay ku maal-gashanayso 8 bilyan oo TL sideedii sano ee ugu dambeysay qaybta warshadaha difaaca, ayuu wasiirku ku daray.
“Mashruuca waxsoosaarka difaaca, oo ahaa $ 5.5 bilyan 2002, wuxuu gaaray maanta $ 60 bilyan,” ayuu Varank carabka ku adkeeyay .
Si kastaba ha ahaatee mudadii uu taladda wadanka Turkigga hayay Madaxwayne Rajad Dayib Ordagan Turkiggu wuxuu ku talaabsaday horumar balaadhan oo dhinac walba ah gaar ahaan dhinaca warshadaynta hubka iyo Tiknoolajiyadda .
Gar . Ahmed N Guruuje , Falanqeeye arrimaha Siyaasadda iyo Gaashaandhigga Caalamiga ah .
Daawo:Taliska ciidanka Booliska oo faah faahiyey qaraxii caawa ka dhacay maqaaxida Luul Yemeni Muqdisho.
Daawo:Munaasibad lagu shaacinayay Murashaxnimada Yuusuf Faarax Warsame
Daawo Dawlada Somaliya Oo Gudi U Saartay Abaarta Ka Jirta Gobolka Gedo
Berbera:Xaflada Shaacinta Musharixiinta Cali Cabdi Iyo C/rashiid C/laahi
Deg Deg:Ciidamada Eratariya Oo Lagu Eedeeyay Xasuuq Ka Dhan Ah Gobolka Gobolka Tigrayga Ee Itoobiya
Maraykanka Ayaa Si Kumeel Gaadh Ah U Xadiday Diyaaradihiisi Aan Duuliyaha Lahayn
Hargeisa:Shirkada Dahabshiil Oo Maal galisay Barnaamijka Kaalay Hooyo Ila Lugee
Somaliya:Dad Somali Ah Ayaa Waajaha Xaalad Bani Aadantinimo “Wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye “
Dawladu Waa Ay Diiday Waxkasta Oo Xal Ah “C/raxmaaan C/shakuur Warsame”